Soomaali ka qeyb galay shir dhallinyaro oo lagu qabtay xarunta Qaramada Midoobay – Radio Muqdisho
Soomaali ka qeyb galay shir dhallinyaro oo lagu qabtay xarunta Qaramada Midoobay
Abubakar Shiikh Cabdulle oo ah arday takhasus ka dhigto Jaamacada New York University ee ku taalo Magaalada New York ee dalka Maraykanka ayaa ka qayb galay shirka dhallinyarada adduunka oo lagu qabtay xarunta dhaxe ee Qaramada Midoobay oo ku taal magaalada New York.
U jeedada shirkaan ayaa ahayd in la isu keeno hoggaamiyeyaasha dhallinyarada adduunka si ay fikradahooda uga dhiibtaan hiigsaga cusub ee qaramada midoobay oo lagu magaabo Sustainable Development Goals (SDG). Shirkaan oo socday mudo laba maalin ah aya waxaa ka soo qayb galay hoggaamiyeyaasha dhalinyarda qaaradaha aduunka.
Qodabbada looga hadlay shirka waxaa ka mid ahaa dowrka ay dhalinyarada ka cayaari karaan hiigsiga cusub ee UN-ka iyo sida ay uga qayb qaadan qaadan karaan barnaamijyada horumarineed ee ay fuliso Qaramada Midobay. Abubakar oo aha hogaamiye dhalinyaro ahna Soomaliga kaliya ee shirkaas ka qayb galay ayaa ka hadlay dhibka haysato dhallinyarada adduunka gaar ahaan dhallinyarada ku nool wadama soo korayo sida Soomaliya.
“ Nasiib xumo, dhibaatada ka socto waddamada soo korayo sida abaaraha,dagaalo iyo bii’ada oo beddelanta, waxay saameynta ugu wayn ku yeelan doontaa dhallinyarada hadda ku nool waddamadaan oo ah kuwa inta badan nafta ku waayo aafooyinka iyo dagaallada” sidaa waxaa yiri Abubakar oo khudbad ka jeediyay madasha shirkaas.
Sidoo kale Mr Abuukar aya ku dooday sida ay muhiimadda u leedahay in dhalinyarada laga qayb galiyo hoggaanka si ay mustaqbalkooda uga shaqeeyaan. Isagoo ugu baaqay dowladda Soomaaliya in ay wax ka qabato dhibaatada haysato dhalinyarada Soomaaliyeed kana qayb galiso dhallinyarada maamulka iyo hoggaaminta dalkooda.
Madaxweynaha Soomaaliya oo gaaray Dhuus Mareeb